Archive du 17/04/2012
Afera �bois de rose�
Vaky ny ady
Niala tamin�ny fahanginany ary namboraka tsiambaratelo ny Dr Randriamiandrisoa Joseph taorian�ny nanilihan�i Andry Rajoelina azy tsy ho minisitry ny tontolo iainana sy ny ala tao anatin�ny governemanta Beriziky ny alin�ny zoma 13 aprily 2012 teo.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Mafampana ny rivotra politika
Naneho fisaorana ny mpitondra tetezamita ny amin�ny tsy nanendrena ilay olona saika hotendrena ho Lehiben�ny Faritra ao Amoron�i Mania farany teo ireo ankolafy politika maro misy any an-toerana raha nihaona tamin�ny mpanao gazety ny sabotsy 14 aprily 2012 teo.
Ankolafy Ravalomanana Toliara
�Tapitra ny fiala-nenina�
Fampodiana an�i Dada
Hihamafy ny hetsik�i Magro
Santatra ihany ny nidinan�ireo mpitolona mitaky ny hamerenana ny ara-dal�na teny Ivandry, namonjy ny biraon�ny SADC, omaly, araka ny fanazavana avy amin�ireo mpitarika ny hetsika.
Tafiditra anaty kizo
Misolo vonjimaika ny toeran�ny minisitry ny ala sy ny tontolo iainana ny praiminisitra Omer Beriziky, araka ilay didim-panjakana nivoaka ny faran�ny herinandro teo.
Mety amin�ny TGV ny fiaraha-miasa amin�ny TIM
Tsy misy vondron�olona iray na roa afaka mitondra irery ity firenena ity fa tsy maintsy hiaraha-mitantana izany, hoy ny CT Andriamalala Mamy Freddy filohan�ny vondrona parlemantera TGV eny anivon�ny Kongresin�ny tetezamita, raha tiana ny hivoahana amin�izao krizy misy antsika izao ary tompon�andraikitra amin�izany avokoa ny mpanao politika rehetra.
Raharaha �26 janoary� sy �7 febroary�
Hanokafana fanadihadiana vaovao
Mbola miteraka adihevitra lehibe hatramin�izao ny zava-nitranga ny 26 janoary 2009 sy ny 7 febroary 2009.
Hosamborina ve ?
Mandra-piandry izay hambaran�ny fitsarana tamin�ny fitoriana napetrany dia nanamafy tao amin�ny Radio France Internationale (RFI) ny profesora Zafy Albert fa tafiditra amin�ny raharaha fanapahana sy fanondranana boaderozy i Andry Rajoelina.
Nanaitra ny SADC tamin�ny torimasony
Nihazo ny foiben-toeran�ny biraom-pifandraisan�ny SADC, teny Ivandry, omaly antoandro ny delegasionan�ny ankolafy Ravalomanana, notarihin�ny filohan�ny Kongresin�ny tetezamita, Mamy Rakotoarivelo.
Loto ao Toamasina
Jeren�ireo olom-boatendry fotsiny
Fako, loto, rano miandrona etsy sy eroa � izay zary fiainana isan�andron�ny mponina ao Toamasina tao anatin�izao tetezamita izao.
Ny eo ihany no eo !
Asa na samy variana amin�ny asa aman-draharaha sy ny fanarahana akaiky ny fizory ny vaovao momba ny fiainam-pirenena, fa dia nangina ilay resaka fanatsarana sy fandaminana tokony ho natao teo amin�ny sehatry ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolon�ny haino aman-jery amin�ny ankapobeny.
Mba diniho kely !
Mbola tena henjana ny Malagasy raha tsipy kanetibe no resahana. Io angamba no taranja ara-panatanjahantena iray, tena mampamiratra antsika ary mampalaza ny Malagasy maneran-tany mihitsy.